OMN: Emerging Threats In The Horn Of Africa (LIVE) Sept 14, 2017 – Kichuu
HomeNewsAfricaOMN: Emerging Threats In The Horn Of Africa (LIVE) Sept 14, 2017
GaachanaGurraacha-“Amma kan barbaadamu namuu waan amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru hubatuu dha. Kan dhufaa jiru, immoo kan caalu ta’uun hin mamsiisu.
Qabsoon Oromoo daangaa tokko tiksuu irratti kan hundaa’ee miti. Qabsoon Oromoo mootummaa Oromoof dhaabbatu deebisanii ijaaruu dha. Qabsoon Oromoo galiin isaa Bilisummaa Oromoo mirkaneessuu dha.
Amma kan hubatee arguuf, lolli karaa Bahaa, Kibbaa fi Kibba Bahaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru lola daangaa miti; lola gosaas miti. Lolichi lola qabsoo Oromoo dhabamsiisuuf akeekame. Kana duuba kan jiru, wayyaanee dha; lola Wayyaaneen gaggeeffamaa jiru akka ta’e shakkii hin jiru. Lolli akkanaa karaa Kibbaa, karaa Kaabaa, fi karaa lixaas boru kan itti fufuu dha. Wayyaaneen bara bittaa dheereffachuu fi qe’ee ishii keessatti nagaa argachuuf qe’ ee Oromoo keessatti ibidda qabsiisaa jirti. Kana tolchanii hubachuun barbaachisaa dha.
Egaa, dubbiin kun kan akka qoosaatti dhiisanii miti; dubbiin kun furmaata waarawaa yoo hin argatiin, jireenya Oromoo kan balleessuu dha; biyya Oromoo kan barbadeessuu dha. Kana ofirraa deebisuuf Oromoon dandeettii qaba; beekumsas qaba. Hidhannoo jabeeffachuun immoo kunoo amma dhiyaateera. Yeroon itti GaachanaGurraacha fannoo irraa buufnus gaheera.
Oromoonis qe’ee Wayyaanee keessatti yeroon inni ibidda qabsiisu fagoo miti; lola hin oolle kanaaf qophaa’uun barbaachisaa dha; fageessanii karoorfachuu fi hojjachuun murteessaa dha.” Gaachana Gurraacha